Ilaina mafy ny mampiditra SNF miaraka amin'ny loharanom-pahalalana bebe kokoa, tsy amin'ny resaka fitaovam-piarovana manokana ihany, fa koa amin'ny loharanom-pahalalana sy mpiasa miasa amin'ny fisorohana aretina.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra SARS-CoV-2 / COVID-19 tany Etazonia, dia fantatray tsara ny fahalemen'ny isan'ny marary sasany. Tany am-piandohana, ny toeram-pitsaboana mpanampy mahay sy ny toeram-pitsaboana maharitra hafa dia nanomboka naneho ny fironana amin'ny famindrana ny aretina virus.
Avy amin'ny loharanom-bola fisorohana aretina tsy voafetra ka hatramin'ny marary marobe ary matetika ny mpiasa dia manify, ireo tontolo ireo dia nampanantena fa hihazona ilay aretina. Na dia fantatray fa izany dia ho osa malemy, firy no tena voa? Tamin'ny andro fiandohan'ny valan'aretina dia natao tamin'ireo izay nanana soritr'aretina ihany ny fitsapana, saingy nitombo ny loharanom-pahalalana, dia toy izany koa ny fahafahan'ny fitsapana. Ny fanadihadiana vaovao iray avy amin'ny Centres for Disease Control and Prevention's Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) dia nanombatombana ny fihanaky ny COVID-19 tao amin'ny toeram-pitsaboana mpitsabo mahay Detroit (SNF) nanomboka ny volana martsa ka hatramin'ny Mey tamin'ity taona ity.
Ny fampiasana fanadihadiana natao matetika izay nanandramana ny mpiasa sy ny mponina na inona na inona soritr'aretina, dia nahita antontan'isa mampiahiahy tokoa manerana ny enina amby roapolo an'ny SNF an'ny Detroit. Ny fanandramana dia niseho tamin'ny fotodrafitrasa marobe mifototra amin'ny laharam-pahamehana ary natao niaraka tamin'ny departemantan'ny fahasalamana tao an-tanàna. Ankoatr'izay, ny mpikaroka dia nanao fanombanana sy fikajiana momba ny fisorohana aretina amin'ny onika- "Ny fanombanana roa IPC fanaraha-maso dia natao ho an'ireo trano 12 nandray anjara tamin'ny fanadihadiana faharoa ary nahitana ny fanadinana ireo fomba fanao cohorting amin'ny fampiasana planina gorodona, famatsiana ary fampiasana fitaovam-piarovana manokana, tanana fomba fidiovana, drafitra fanalefahana mpiasa ary hetsika IPC hafa. ”
Nanampy tamin'ny fanangonana vaovao momba ny vokatra tsara, ny soritr'aretina, ny hopitaly ary ny maty ny sampana fahasalamana eo an-toerana. Tamin'ny farany, hitan'ny mpikaroka fa ny 7 martsa ka hatramin'ny 8 may, 44% n'ny mponina 2,773 Detroit SNF dia hita fa miabo amin'ny SARS-CoV-2 / COVID-19. Ny taonan'ny mediana ho an'ireo mponina tsara dia 72 taona ary 37% no niafarany nitaky hopitaly. Mampalahelo fa 24% tamin'ireo nanaporofo ny zava-nisy no maty. Nanamarika ny mpanoratra fa "amin'ireo marary 566 COVID-19 izay nitatitra soritr'aretina, 227 (40%) dia maty tao anatin'ny 21 andro fitiliana, raha ampitahaina amin'ny 25 (5%) amin'ireo marary 461 izay tsy nitatitra soritr'aretina; 35 (19%) no maty tamin'ireo marary 180 izay tsy fantatra ny soritr'aretina. ”
Amin'ireo fotodrafitrasa 12 izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana ny fihanaky ny teboka faharoa, valo no nanamafy ny fampivondronana ireo marary tsara tany amin'ny faritra natokana talohan'ny fanadihadiana. Ny ankamaroan'ny fotodrafitrasa dia nisy fanisana ny marary 80 teo ho eo ary tamin'ireo notsapaina nandritra ny fanadihadiana faharoa, 18% dia nisy valiny tsara ary tsy fantatra ho tsara. Araka ny nomarihan'ny mpanoratra, ity fandinihana ity dia manondro ny fahalemen'ny isan'ny marary sy ny taha avo lenta. Manerana ireo 26 SNFs ireo dia nisy taham-panafihana 44% amin'ny ankapobeny ary tahan'ny hopitaly mifandraika amin'ny COVID-19 amin'ny 37%. Ireo tarehimarika ireo dia manaitra ary manondro ny filàna mitohy ny fikarohana mialoha, ny ezaka fisorohana aretina, ny fiaraha-miasa, ary ny fiaraha-miasa amin'ireo sampan-draharahan'ny fahasalamam-bahoaka eo an-toerana. Ilaina mafy ny mampiditra SNF miaraka amin'ny loharanom-pahalalana bebe kokoa, tsy amin'ny resaka fitaovam-piarovana manokana ihany, fa koa amin'ny loharanom-pahalalana sy mpiasa miasa amin'ny fisorohana aretina. Satria tontolo marefo ireo dia ilaina ny fanohanana mitohy tsy amin'ny faharetan'ny areti-mifindra fa amin'ny manaraka.